Ciidammada Qaranka Oo 25 Jirsaday Iyo Madaxweyne Biixi Oo Rejo Ka Muujiyey Dhismaha Ciidamada Cirka Ee Somaliland | Himilo Media Group
Ciidammada Qaranka Oo 25 Jirsaday Iyo Madaxweyne Biixi Oo Rejo Ka Muujiyey Dhismaha Ciidamada Cirka Ee Somaliland
Hargeysa, 3 Feebarweri, 2019 (Himilo)- Xarunta Guud ee Taliska Ciidanka Qaranka, waxa shalay lagu qabtay xuska 25-guurada ka soo wareegtay markii la aasaasay Ciidanka Milatariga Somaliland oo beegnayd 2-dii Febarwari 1994-kii, iyadoo sannad kasta oo xuskeedu ku beegan yahay taariikhda shalay oo kale.
Munaasibad ballaadhan oo ay ka muuqatay diyaar-garow baaxad leh oo ay goob-joog ka ahaayeen Taliyaha Guud ee Ciidanka, Saraakiisha Milatari, Ciidamo kala duwan, bahda Fanka, ayaa waxa kala qayb-galay Madaxweynaha Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi oo ay weheliyaan xubno ka tirsan Golihiisa Wasiirrada iyo Taliyeyaasha Ciidamada kala duwan ee dalka. Waxa kale oo munaasibadda ka qayb-galay Xildhibaanno kasocday Goleyaasha Baarlamaanka, Siyaasiyiin ka tirsan Xisbiyada mucaaradka, masuuliyiin hore xilal uga soo qabtay xukuumadihii u kala dambeeyey talada dalka iyo Marti-sharaf kale.
Ugu horeyn, Madaxweynaha Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi iyo masuuliinta dowladda, ayaa salaam-sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka Milatariga, isagoo ka hor intii aanay furmin munaasibaddu uu madaxweynuhu kormeeray isla markaana xadhigga ka jarya dhismeyaal cusub oo lagu kordhiyey xarunta taliska. Sidoo kale wuxuu madaxweynuhu xadhigga ka jaray korontada laga dhaliyo Tamarta Qoraxda oo laga hirgeliyey xarunta Birmadka iyo Miiska Saraakiisha ee Ciidanka Qaranka, isagoo markii dambe ku soo laabtay goobta ay ka socotay munaasibadda loo qabtay dabbaal-degga Ciidanka Qaranka Somaliland oo xilligii la aasaasay ay ka soo wareegtay muddo ku siman rubuc-qarni.
Kaddib riwaayad iyo suugaan ay madasha ku soo bandhigeen Fannaaniinta Ciidanka Qaranka, waxa halkaas ugu horeyn hadal ka jeediyey Taliyaha Guud ee Ciidanka Qaranka Sarreeye Gaas Nuux Ismaaciil Taani oo ka warbixiyey wixii u qabsoomay ciidanka sannadkii tagay. Waxa kale oo uu taliyuhu si faahfaahsan uga warramay geeddi-socodkii dhismaha ciidanka Qaranka muddadii uu jiray, caqabadihii ka hor-yimi xilligii la aasaasayey, horumarkii uu sameeyey iyo Guulihii laga gaadhay siyaasadda dhismaha ciidanka.
“Ciidanku wuxuu ku dedaalay sidii uu u ilaalin lahaa xuduudaha dalka, waxaanu ku dhaqaaqnay sidii loo tayayn lahaa tabobarna loo gelin lahaa ciidanka. Waxaanu abuurnay Dugsiyo tabobar oo ciidanku wuu leeyahay Lix dugsi, waxaase jira afar dugsi oo kale oo lagu tabobaro dhibbooga. Waxa tabobar dibadda ah noogu maqan saraakiil, qaarna way soo dhammeysteen sannadkan. Waxa kale oo dibadda noogu maqan Injineerro, dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal. Mudane Madaxweyne, waxaanu ku guulaysannay inaanu xerooyinka Ciidanka u helno Solar aanu kaga maaranno kharashkii badnaa ee nagaga baxayay korontada,” ayuu yidhi Taliye Nuux Ismaaciil Taani oo sharraxaad ka bixinayey wax-qabadka ciidanka Qaranka ee sannadkii tagay. Taliyuhu waxa kale oo uu ka hadlay awoodda ciidanka Qaranku u leeyihiin difaacista xuduudaha dalka, isagoo sheegay inay jawaabo ku filan oo duruus laga korodhsaday ay ciidamada qaranku ka bixiyeen weerarro iyo wax uu ku tilmaamay daan-daansi milatari oo kaga yimi maamul-goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland.
Madaxweynaha Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi oo munaasibadda ka jeediyey khudbad dhinacyo kala duwan xambaarsan, ayaa ciidanka Qaranka ku hambalyeeyey 25-guuradooda, waxaanu ugu duceeyey cimri-dherer iyo Caafimaad saraakiisha, Ciidamada Qaranka iyo Qoysaskoodaba.
“Qaranku wuxuu uga mahadnaqayaa Ciidanka difaaca ay ugu jiraan qaranka iyo in ay yihiin dhidibada 1aad ee ilaalinta qaranka, Dawladnimadu waxay ku fadhidaa saddex qodob waanay kala horeeyaan, ka ugu horeeya waa Ammaanka, ammaankana ciidamadaa inoogu horeeya markaa ciidamada kala duwan waa inaan siinaa mudnaanta Koowaad, hadday tahay ammaan Mahadnaq, Sharaf, Xurmayn iyo dhaqaaleba, Xukuumaddan maanta joogtana taasaa u ah mudnaanta koobaad,” ayuu yidhi Md Muuse Biixi.
Isagoo hadalkiisa sii watay, waxa uu yidhi, “Mudnaanta labaadna waa in talo laysku wada kalsoon yahay la helo taasoo lagu helaayo sida xeerarkeenu dhigayaan in Xilka hoggaamintu yahay meerto, oo goleyaasha qaranka ee la doortaa gole waliba uu wakhtigiisa ku bedelmaa, oo shacabku mar labaad codkooda bixiyaan hadday tahay Madaxtooyo, hadday tahay guurti hadday tahay Baarlamaan iyo hadday tahay Dawladdo hooseba, waayo waxaa dan loo mooday oo Caalamka oo dhami eegay in Shantii sanno ama Lixdii sannaba mar la bedelo golahaasi si loo helo ama kii hore loogu celiyo ama dhiig cusub, dadkana taladu u sinaato.”
Madaxweyne Biixi oo ka hadlayey Dalalka deriska iyo caalamka ayaa yidhi, “Waxa kale oo aan doonayaa inaan caddeeyo inay Somaliland jaararkeeda iyo Caalamkoo dhan nabad ugu baaqayso, nabad baan u baahannahay dal dhismayaanu nahay ciddna duulimaad kuma nihin, cid walba nabad baanu ka rabnaa, waxaase la yaab leh Dawladda Maanta Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Kheyr ee Xamar ka dhisani ilaa maalintii la doortay ilaa maalinkaa maanta ah, waxa ay weerar joogto ah oo qaawan oo dhinac walba leh ay ku hayaan Qaranka Somaliland, Dagaalladaa laga sheekaynayey waa joogto, Dagaalka Dhaqaale waa joogto, ka Cuna qabatayni waa joogto, ka been abuurka ahi waa joogto.”
Dhinaca kale, waxa xusid in magaalooyinka waaweyn ee gobolka Dalka lagu qabtay munaasibado loogu dabbaal-degay xuska 25-guurada ciidanka Qaranka, halkaas oo ay kala qayb-galeen saraakiisha ciidanka Milatariga ee masuuliyiinta heer gobol iyo degmo ee Dowladda.